လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကြက်ဖရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
ဇနီးဖြစ်သူက အပြည့်အဝ ပံ့ပိုးမှုတွေရှိပါတယ်.
ကြက်ဖတစ်ယောက် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်. ဇနီးဖြစ်သူ ဂျနိုင်းကလည်း ကြက်ဖရဲ့ ဂီတအလုပ်တွေ အပေါ် ပံ့ပိုး ကူညီမှုတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.
အဆိုတော် ကြက်ဖတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ချစ်ဇနီး ဂျနိုင်း အကြောင်းကို ပြောပြလာပါတယ်. ဂျနိုင်းဟာ ကြက်ဖ နဲ့ အတူ Hip Hop သီချင်းတွေကို အတူတူသီဆိုလေ့ရှိတဲ့သူပါ. ကြက်ဖရဲ့ ဂီတအလုပ်တွေမှာလည်း ဇနီးဖြစ်သူက ပံ့ပိုးပေးတာတွေ ရှိတယ်လို့ Duwun Media ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
''ဂျနိုင်းကကြာပြီ.ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင် ၂၀၀၅ ၂၀၀၆လောက်ကတည်းက နောက်ကနေ ကူပြီး ဆိုပေးနေတာ သူက ရှေ့လည်းမထွက်ချင်ဘူး။ နောက်မှာပဲ နေတယ်။အရှေ့ထွက် ခိုင်းလည်းမထွက်ချင်ဘူး ရအောင်တော့ပြောနေတာပဲ သူက ကျွန်တော့်ကိုကူညီရုံပဲ သူကနောက်က Supporting ပဲလုပ်ချင်တာ'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ကြက်ဖရဲ့ ဂီတအလုပ်တွေ အပေါ် အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သူကတော့ ဇနီးချော ဂျနိုင်း ဖြစ်ပါတယ်. စည်းကမ်း တကျ နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဆန္ဒတိုင်းကိုလည်း လိုက်လုပ်ပေးတတ်သူဖြစ်တယ်လို့ Myanmar Music Wave 2018 ပွဲမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
''အပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးနဲ့ဆိုမယ်။ သူပဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်။အကုန်လုံးကိုချိန်းပေးတယ်။ သူတို့တွေကို ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ budget နဲ့ လမ်းစရိတ်စားဖို့သောက်ဖို့ကအစသက်သာအောင်မကားသွားအောင် သူက ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် စီစဉ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး။ သူအများကြီးတောက်လျှောက်ကူညီခဲ့လို့လည်း ကျွန်တော် နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့နော်'' လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ ကြက်ဖနဲ့ ဂျနိုင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကတော့ အကြောင်းအရင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်. ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းတွေကို ဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။
''ဒါပေမယ့်လည်းဘယ်နေရာမှကောင်းတာမျိုးကြီးပဲမရှိပါဘူး.အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေတာပါပဲ။ကိုယ်လုပ်ချင်တာတစ်မျိုး သူလုပ်ချင်တာတစ်မျိုး သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေ လည်းရှိတာပဲလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့အခွေထွက်ခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကဆို သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူကြိုက်သလို မစီစဉ်ရရင်မလာတော့ဘူးတဲ့ အဲ့ကျတော့ ပြန်ချော့ရတာပေါ့.တကယ်တော့ သူကစေတနာနဲ့လုပ်တာပေါ့လေ။တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်က မကြိုက်ဟန်ပြလိုက်တော့ သူကစိတ်ကောက်တာပေါ့လေ. အမျိုးသမီးကိုအလျှော့ပေးရတာပေါ့လေ။ သူကကိုယ့်ထက်ကိတ်တယ်လေ ကျွန်တော့်ဆရာပြောတာဆို မင်းကိုမင်းမိန်းမက ကိုင်ပေါက်တော့မှာတဲ့'' ဆိုပြီးတော့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။